မျက်တောင် ကော့ဆေး တွေ အရည်ပျော် ပြီး vampire ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်…. - ZeeKwat
Home » Gallery » Health » မျက်တောင် ကော့ဆေး တွေ အရည်ပျော် ပြီး vampire ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်….
မျက်တောင် ကော့ဆေး တွေ အရည်ပျော် ပြီး vampire ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်….
မျက်ခွံ တွေကိုလည်း primer လေးလိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။ မျက်တောင် ကော့ဆေး သုံးတဲ့အခါ ကြာကြာခံမယ့် water proof အမျိုးအစား ကို ရွေးကြတယ်။ ချွေးထွက် လို့ ရေစို လို့ မျက်တောင် ကော့ဆေး တွေ အရည်ပျော်လာရင် မျက်ကွင်းတွေမည်းကုန်ရောလေ။ ဒါပေမဲ့လည်း ရေစိုခံမျ က်တောင် ကော့ဆေး သုံးတာတောင် မျက်တောင် ကော့ဆေး တွေ အရည်ပျော်ပြီး မျက်ကွင်းတွေမည်း၊ vampire ဘဝ ရောက်ရတာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့လိမ်းခြယ်ပုံ မှာ တစ်ခုခုလိုနေလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
မျက်နှာ အသားအရေ က သဲကန္တာရ လို ခြောက်လှပါတယ် ဆိုရင်တောင် မျက်ခွံတွေက အဆီပြန်နေတာကို သတိထားပြီး ကြည့်ကြည့်ပါ။ အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်း မျက်တောင် ကော့ဆေး တွေ အရည်ပျော်ကျရတယ်လေ။ မျက်ခွံ ပေါ်က ပိုနေတဲ့အဆီတွေကို အဆီစုပ်စက္ကူလေးနဲ့စုပ်ပြီး ပေါင်ဒါလေးတို့ပေးရမယ်။
မျက်နှာအတွက် မိတ်ကပ် လိမ်းရင် စွဲနေအောင် primer လိမ်းကြတယ်။ မျက်ခွံ တွေကိုလည်း primer လေးလိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။ အိုင်းရှဲဒိုးတွေလည်း ကြာကြာခံတယ်။ မျက်တောင် ကော့ဆေး တွေလည်း မပေတော့ဘူး။
ကိုယ်သွားလာရမယ့်နေရာနဲ့ ကိုယ့်လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ် မူတည်ပြီး မျက်တောင် ကော့ဆေး ကို ရွေးကြရတာပဲလေ။ ရုံးထဲမှာ တစ်နေကုန်ထိုင်ပြီး ပြန်မယ်ဆိုရင် သာမာန် မျက်တောင် ကော့ဆေး နဲ့ အဆင်ပြေတယ်။ အပြင်ထွက်နေရသူမျိုးဆိုရင်တော့ ချွေးစို၊ ရေစိုနဲ့ မျက်တောင်ကော့ဆေးတွေ ပျော်မကျဖို့ ရေစိုခံ မျက်တောင်ကော့ဆေးကိုပဲ ရွေးရမှာပါ။ တစ်ခုရှိတာကတော့ ရေစိုခံ မျက်တောင် ကော့ဆေး တွေကိုမသုံးခင်မှာလည်း lash primer လေး အရင်သုံးပေးလို့ ရပါသေးတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့ ရလဒ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါနော်။
မကွခြှံ တှကေိုလညြး primer လေးလိမြးပေးသငြ့ပါတယြ။ မကွတြောငြ ကော့ဆေး သုံးတဲ့အခါ ကှာကှာခံမယြ့ water proof အမွိုးအစား ကို ရှေးကှတယြ။ ခွှေးထှကြ လို့ ရစေို လို့ မကွတြောငြ ကော့ဆေး တှေ အရညပြွောလြာရငြ မကွကြှငြးတှမညြေးကုနရြောလေ။ ဒါပမေဲ့လညြး ရစေိုခံမွ ကတြောငြ ကော့ဆေး သုံးတာတောငြ မကွတြောငြ ကော့ဆေး တှေ အရညပြွောပြှီး မကွကြှငြးတှမညြေး၊ vampire ဘဝ ရောကရြတာကတော့ ကိုယြ့ရဲ့လိမြးခှယပြုံ မှာ တစခြုခုလိုနလေို့ ဖှစပြါလိမြ့မယြ။
မကွနြှာ အသားအရေ က သဲကနျတာရ လို ခှောကလြှပါတယြ ဆိုရငတြောငြ မကွခြှံတှကေ အဆီပှနနြတောကို သတိထားပှီး ကှညြ့ကှညြ့ပါ။ အဲ့လိုမွိုးဆိုရငလြညြး မကွတြောငြ ကော့ဆေး တှေ အရညပြွောကြရွတယလြေ။ မကွခြှံ ပေါကြ ပိုနတေဲ့အဆီတှကေို အဆီစုပစြကျကူလေးနဲ့စုပပြှီး ပေါငဒြါလေးတို့ပေးရမယြ။
မကွနြှာအတှကြ မိတကြပြ လိမြးရငြ စှဲနအေောငြ primer လိမြးကှတယြ။ မကွခြှံ တှကေိုလညြး primer လေးလိမြးပေးသငြ့ပါတယြ။ အိုငြးရှဲဒိုးတှလညြေး ကှာကှာခံတယြ။ မကွတြောငြ ကော့ဆေး တှလညြေး မပတေော့ဘူး။
ကိုယသြှားလာရမယြ့နရောနဲ့ ကိုယြ့လှုပရြှားမှုတှအပေြေါ မူတညပြှီး မကွတြောငြ ကော့ဆေး ကို ရှေးကှရတာပဲလေ။ ရုံးထဲမှာ တစနြကေုနထြိုငပြှီး ပှနမြယဆြိုရငြ သာမာနြ မကွတြောငြ ကော့ဆေး နဲ့ အဆငပြှတယြေ။ အပှငထြှကနြရသေူမွိုးဆိုရငတြော့ ခွှေးစို၊ ရစေိုနဲ့ မကွတြောငကြော့ဆေးတှေ ပွောမြကဖွို့ ရစေိုခံ မကွတြောငကြော့ဆေးကိုပဲ ရှေးရမှာပါ။ တစခြုရှိတာကတော့ ရစေိုခံ မကွတြောငြ ကော့ဆေး တှကေိုမသုံးခငမြှာလညြး lash primer လေး အရငသြုံးပေးလို့ ရပါသေးတယြ။ ပိုကောငြးတဲ့ ရလဒကြို ပိုငဆြိုငနြိုငမြှာပါနြော။